Maqaal : Samata-bixinta Puntland
Tags: puntland golaha wakiilada golaha
In golihii Fulinta iyo Golahii sharci dejinta isku dhex-mileen
In golihii sharci dejintu maanlin cad qaataan laaluush hanti qaran oo dhan 2 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Laaluushkaasoo ay bixisey golaha Fukinta ee xukuumada. Lama oran karo musuq maasuq ee waa boob hantidii caruurta Puntland ee badaha aduunka ku dhimanaya wax loogu qaban lahaa.
In madaxda sare ee fulinta laga la’yahey iney meel ku sheegto hanti qaran oo wadarteedu dhan tahey $37.8 milyan oo doolar (DW $15 milyan iyo $7.8 milyan Somali Fedral government). Dastuurka Puntland wuxu qabaa in uusan jirin qof ama koox ka weyn sharciga.
In Puntalnd la keenay makiinado lacagaha daabaca hantidii shacabkana gacanta u gasho kooxda makiinadaha. Makiinadahaas iyo lacagtaasna aan marin Baarlamanaka Puntland. Isla markaasna lagu tuhunsan yahey in xubno dawladda ka tirsan wax ku leeyihiin. Maxaa dulmi u dhiman ummadda waxaa lagu sameenayo. Yaa dalka iska leh? Golaha wakiiladu yey wakill u yihiin? Yaa arrintaan xisaabtankeeda iyo ka hor-tageedu u yaal.
In dawladda labadeeda goleba ku fashilmeen in Puntalnd laga saaro dawladda qabiil ku saleysan loona gudbo doorasho xor ah hal-cod hal-qof si loo helo dawlada shacabku leeyahey.
In awood qeebsigii Aqal Sare ka careysiisey beelihii aan horey wax u heesan ka dib markii kuwii wax heestey loogu darey xubno
In xukuumadu fartu ugu fiiqdey beelaha in xubnaha baarlaanka la kordhiyo taasoo runtii khal khal dastuuri ah keentey.
In tabasho xun ka soo yeertey Beesha Tande Daarood kulwa kalena guuxayaan halkey wax ku dambeen doonaana la garan Karin.
In dawladu lumisey kalsoonidii shacab. Taasna keeni karto in shacabku kuleel dartiis furka tuuraan oo kacdoon ka dhaco gobolada
In golaha wakiiladu ansaxiyeen heshiisyo waqtigoodu dheer yahey, lagana warqabin saami-qeesigeeda, iyo shurrudaha ku jira iyagoo wax nuqul ah uusan jirn. Shacabkuna ka dhaga la’yahey ilaa manta oo ah warbixin ah aysan ka heen heshiisyadas kala ah Dubai World oo 30 sano ah iyo CCECC oo intuu yahey iyo waxey ku bedelanayaan aan la ogeyn.
Emaila :[email protected]
"Harsh light" New York Times Crosswor…
"Harsh light" New York Times Crossword clue
Water Market Development Manager - MEA - Exterran - Dubai
Puffy natural hairdo